I-L'Alpage de la Bergerie, ifulethi elisendlini ethokomele yasepulazini! - I-Airbnb
I-L'Alpage de la Bergerie, ifulethi elisendlini ethokomele yasepulazini!
Nâves-Parmelan, Auvergne-Rhône-Alpes, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-La Conciergerie
Ifulethi elibanzi nelithokomele 4 endlini endala yasepulazini kusukela ngekhulu le-18. Uzojabulela ukungena okuhlukile, ithala elikhulu lamapulangwe kanye nokufinyelela engadini. Indawo ekahle: imizuzu emi-5 ukushayela usuka ezitolo, imizuzu eyi-10 ukusuka enkabeni yedolobha i-Annecy kanye nechibi, kanye nezindawo zokungcebeleka ze-ski imizuzu engama-30. Ukufinyelela okuqondile: emfuleni i-Fier enezindawo zokugeza zemvelo, izintaba, ama-cascade. Umkhathi onokuthula nobucolic uqinisekisiwe!
IBergerie eyiqiniso yakhiwe kabusha ezindlini, enendawo yokupaka kanye nomnyango ozimele ngezitebhisi zokhuni.
Ngaphandle, khuphukela phezulu endaweni yokhuni yangasese enamatafula asengadini nezihlalo zokudlela, kodwa futhi nezihlalo zedekhi ezinethezekile ukuze ujabulele ingadi ethule.
Indawo yokwamukela izivakashi ebheke ikhishi elinetafula elikhulu lomndeni (ama-6pers), futhi elihlonyiswe ngokuphelele (ihhavini, i-microwave, i-toaster, iketela, ifriji, ifriji, umshini wokuwasha izitsha, ukupheka kokungeniswa, nakho konke okudingekayo ekuphekeni).
Kubathandi bekhofi, ungajabulela umshini we-Nespresso, i-bodum noma umenzi wekhofi wokuhlunga. Kubathandi bakashizi, isethi ye-raclette ne-fondue onawo.
Ikhona le-TV lifakwe umbhede onethezekile oguqulekayo (140x200), nokuzijabulisa okuningi (ithelevishini, isidlali se-dvd, imidlalo yebhodi, amathoyizi, omagazini ...) .
Igumbi lokulala linemibhede ephindwe kabili (160x200), kanye nesitoreji esiningi.
Ishawa enkulu yokuhamba ngezinyawo, ibhentshi lokusebenzela elinezitsha zokugeza, isifudumezi-thawula, ishalofu elinezibuko, umshini wokuwasha. Izindlu zangasese ezihlukene.
I-Velux enombono ezintabeni!
Ilineni lasendlini linikezwa bonke (amathawula, amashidi, amathawula etiye).
Indawo ethule nenhle phakathi nemvelo futhi kusukela kumaminithi angu-10 ukuya enkabeni yedolobha i-Annecy kanye nechibi.
Ibungazwe ngu-La Conciergerie
I-La Conciergerie du Lac izokwamukela ngemfudumalo lapho ufika ukuze ikunikeze okhiye futhi ikubonise nendawo yokuhlala. Bazoba othintana nabo ngesikhathi sakho sonke sokuhlala uma kunesidingo!
Ukufika kungenzeka phakathi kuka-4 ntambama. futhi 9 p.m. Ngemva kwehora lesi-9 ebusuku. , uma ukufika ngokuzenzakalelayo kungenzeki endaweni yakho, kuzocelwa isithasiselo sama-euro angama-20.
U-Julie & Loïc bahlala ngakubo futhi bazokujabulela ukwabelana nawe ngothando lwabo lwesifunda nemvelo, kodwa futhi babelane nawe ngezindawo ezihamba phambili endaweni.
I-La Conciergerie du Lac izokwamukela ngemfudumalo lapho ufika ukuze ikunikeze okhiye futhi ikubonise nendawo yokuhlala. Bazoba othintana nabo ngesikhathi sakho sonke sokuhlala uma…
Inombolo yepholisi: 74198000006CZ
Hlola ezinye izinketho ezise- Nâves-Parmelan namaphethelo